शुभचिन्तकको आशीर्वादले कोरोनालाई पराजित गर्दैछौं : डा. भोला रिजाल – Health Post Nepal
२०७७ असोज २ गते १०:०५
स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल नेपालका प्रतिष्ठित चिकित्सक हुन्। डा. रिजाल नेपालको पहिलो स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्। चिकित्सा क्षेत्रमा आफ्नो नाम स्थापित गराएका डा. रिजाल साहित्य र संगीत क्षेत्रमा पनि लोकप्रिय छन्।
उनी नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन्। डा. रिजाल अहिले ह्याम्स अस्पतालमा पनि चिकित्सा पेसामा संलग्न छन्। तर, बिरामीको सेवा समर्पित हुँदाहुँदै उनी र श्रीमती सरलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। उनी १७ दिनदेखि ह्याम्स अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनीहरू स्वास्थ्य अवस्था तथा अस्पताल बसाइबोरमा हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले टेलिफोनमा गरेको छोटो कुराकानी :
अहिले तपाईंहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहेको छ?
अहिले हामी दुवैजनाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। बीचको समयमा स्थिर थिएन। ३–४ दिनयता स्थिर नै रहेको छ।
यसैगरी, स्वास्थ्य अवस्था ठीक भइरह्यो भने हामीहरू २–३ दिनमा घर जाने तरखर गर्दै छौं।
अहिलेसम्म अस्पताल बसेको १७ दिन बितिसकेको छ।
यो अवधिमा धेरै परीक्षण भए। मापदण्ड अनुसार जे–जे जरुरत पर्छ गर्दै गयौं।
पहिला हामी दुवैलाई माइल्ड फिबर भएको थियो। श्रीमती सुगर र केमोथेरापीको बिरामी भएकी हुनाले पोजेटिभ देखिएपछि ह्याम्स अस्पताल आइहाल्यौँ।
अहिले परीक्षण गर्दा थोरै माइल्ड केही बाँकी छ भनेको हुनाले एक–दुई दिन पर्खिरहेका छौं। क्लिनिकल हेर्दा हामी दुवै जना स्वस्थ्य नै भइसकेका छौं।
१७ दिनको अवधिमा स्वास्थ्यमा केही समस्या पनि आयो कि?
बीचमा एक–दुई दिन श्रीमतीलाई थोरै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको थियो। जसका कारण अक्सिजन दिनुपरेको थियो। मलाई भने माइल्ड खालको फिबर देखिएको थियो।
हामीले औषधी त्यस्तो केही सेवन गरेका छैनौं। पहिलादेखि खाएको सामान्य औषधी सेवन गर्दै आएका छौं। सरलालाई बीचमा केही इन्जेक्सन दिनुपरेको थियो। त्यही पनि ५ दिनमात्र दिइएको थियो।
तपाईंमा संक्रमण कसरी सर्यो जस्तो लाग्छ?
म केही समयदेखि ह्याम्स अस्पताल आएको थिइनँ। तर, नेपाल मेडिकल कलेजमा निरन्तर गएको थिएँ। त्यहाँ कोभिड व्यवस्थापनमा सक्रिय भएको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थिएँ। त्यहाँ भएका समस्या समाधान गर्दै आएको थिएँ।
मेडिकल व्यक्ति जति जोगिन्छु भने पनि जोगिने सम्भावना हुँदो रहेनछ।
सुरूमा नोबेल कोरोना भन्ने गीत लेख्ने आफैं थिएँ। त्यसै बेलादेखि लिएर सर्वसाधारणलाई जनचेतनाका बारेमा बताउँदै आएको थिएँ।
कोरोनाबाट सुरक्षित कसरी रहने, कसरी हात धुने भन्ने विषयमा अरूलाई बताउँदै–बताउँदै पनि आफैं संक्रमित हुन पुगें।
संक्रमण नहोस् भन्ने त हुन्छ। तर, भयो त्यसमा कुनै आत्मग्लानि रहेको छैन।
केवल जनताको सेवामा गर्दा संक्रमित हुन पुगें।
संक्रमित भएपछि आफन्त र शुभचिन्तकबाट कस्तो साथ पाउनुभयो तपाईंहरूले?
यो समयमा सबैतिरबाट धेरैजनाले माया देखाउनुभयो। त्यही नै रहेछ सबैभन्दा ठूलो कोरोना जित्ने मनोबल।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा विदेशमा रहनुभएका आफन्त, साथीभाइ सबै जनाले सद्भाव, आशीर्वाद दिएकाले पनि होला मलाई कुनै समस्या देखिएन।
हुन त, भगवानको पनि कृपा रहेको छ। सबैको शुभ आशीर्वादले नै ठीक हुँदै गएको छु।
आजसम्मको जीवनकालमा सबैको मायाममता तथा आशीर्वाद कमाएको रहेछु।
अस्पतालमा आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताइरहनुभएको छ त?
बिरामीले अस्पतालमा जसरी बिताउने गरेको छ त्यो भन्दाबाहेक मैले अरू केही गरेको छैन। मैले धेरैबेर टेलिफोनमा कुरा गरिनँ। सोधेका केही कुराको जवाफ पनि छोटोमा दिने गरेको छु। बिरामीले पालना गर्नुपर्ने जति पनि कर्तव्य छन् त्यही पालना गरेर बस्यौं।
हामीहरूको एक कोठामा पाटेसन गरिएको छ। नर्मल खाना घरबाट नै मगाएर खाने गरेका छौं। घरबाट बिहान–बेलुकाको खाजा–खाना आउने गरेको छ।
तर, हामीले बेला–बेलामा चिया बनाउने र तातोपानी, बेसार–पानी, ज्वानो पानी आफैं नै बनाएर खाने गरेका छौं।
तातोपानी हामीले एकदमै धेरै खायौँ। तातो बाफ लिने काम हामीले कहिले पनि छोडेका छैनौं। बाफ लिएको हुनाले पनि सायद हामीलाई कोरोनाले गाल्न सकेन। उमेरको हिसाबले पनि झन गल्नुपर्ने थियो होला। तातोपानी खाने र बाफ लिने काम एकछिन पनि छोडेका छैनौं। त्यसभन्दा बाहेक व्यायाम गर्ने काम पनि गरिहेका हुनाले अहिलेसम्म स्वस्थ नै रहेको छु।
बेला–बेला डाक्टर साब हाम्रो निगरानी गर्न आइरहनु हुन्छ। उहाँहरूसँग बसेर आफ्ना कुरा राख्ने गर्दछु। उहाँहरूले धेरै राम्रो काउन्सिल गरिरहनुभएको छ। डा. राजीव, रक्षा, अनुप, बिनाले एकदमै हामीलाई काउन्सिल गरिरहँदा मनमा केही डर भएन।
एक चिकित्सकको हिसाबले सर्वसाधारणलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ?
सरकारले पालना गर्ने भनेको मापदण्ड फ्लो गर्ने जाने र आफ्नो काम पनि गर्दैँ जानुपर्दछ। सधैं काम गरेर नबसेर पनि सबैको रोजीरोटी, के लगाउने भन्ने कुरा छ।
मानिसहरू यहीं कारणले गर्दा मानसिक तनावमा पनि पुग्न सक्छन्। त्यसकारण आफ्नो काम गर्नका लागि सरकारले मापदण्ड जुन छ, त्यसलाई राम्रोसँग फ्लो गर्नुहोस भन्ने मेरो अनुरोध छ।
कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि अझै फ्रन्टलाइनमा आएर कसरी अरूलाई सजग बनाउने र अन्य जनचेतनाको कुरा गर्ने सजिलो पनि पर्छ। आफ्नो अनुभवले अन्य मानिसलाई शेयर गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा लाग्नेछु। सबैजना सचेत बनौं यही भन्दछु।
One thought on “शुभचिन्तकको आशीर्वादले कोरोनालाई पराजित गर्दैछौं : डा. भोला रिजाल”
Mahesh Khakurel says:
Congratulation to both corona warriors Keep up the spirit Mahesh Khakurel
LeaveaReply to Mahesh Khakurel Cancel reply